Fampandrosoana ny firenena : Lohalaharana amin’ny fandraisana andraikitra ny Kristianina -
AccueilRaharaham-pirenenaFampandrosoana ny firenena : Lohalaharana amin’ny fandraisana andraikitra ny Kristianina
Tsy mitsahatra ny mitady ny tetikady rehetra ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery entina hampandrosoana ny firenena. Ary mandray ny soso-kevitra rehetra omena azy. Ao anatin’izay indrindra, nandray ireo tanora Kristianina misehatra ho amin’ny fampandrosoana ny firenena avy amin’ny Fjkm sy flm ny Filoha, omaly, teny Iavoloha. Ireto voalohany izay naneho ny fahavononana hifanome tanana amin’ny fitondrana foibe tamin’ny alalan’ny fanolorana vina-panarenana an’i Madagasikara. Fantatra fa tetikasa maro efa niarahana nidinika tany aloha tany ity natolotra ny Filoha, omaly ity, ka isan’ny voarakitra ao anatin’izany ny fambolen-kazo hiarovana ny tontolo iainana sy hanomezana asa ho an’ny tanora.
Velom-pankasitrahana, noho izany, ny Filoha Rajaonarimampianina amin’ny fandraisan’ny tanora andraikitra amin’ny fampandrosoana ny firenena satria efa ambara foana mantsy fa ny tanora no ho avin’ny firenena ary ny fandraisana andraikitra dieny izao no antoka ny fampandrosoana ny ho avy. Fa indrindra amin’ny maha Kristianina azy ireo satria ny mpino Kristianina no lohalaharana amin’ny fampandrosoana ny firenena iray, araka ny nambarany Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara. “Ny kristianina no tokony ho lohalaharana amin’ny fandraisana andraikitra ho fampandrosoana ny firenena. Ary raha ny kristianina no mandray andraikitra dia ho mora kokoa ny miady amin’ny kolikoly sy ny fitsaram-bahoaka izay manimba ny firenena”, hoy ny Filoha. Ary notohizana ny tenany nanao hoe, “Efa finiavana anefa no nasehon’ireto tanora ireto tamin’ny fanolorany vina tahaka izao. Izany toe-tsaina amin’ny maha-kristianina izany indrindra no hanaovako antso mba hananan’ny tsirairay.” Ny tanora izay vao nampitana ny fanilo nandritra ny fankalazana ny faha-70 taonan’ny tolom-panafahana ny 29 Marsa farany teo.
Fantatra fa eny anivon’ny fokontany sy ny kaominina no asiana rafitra hiara-hiasa amin’ireto vondrona tanora ireto ka kaominina iray no hanombohana izany.
Voalohany tamin’ ny tantaran’ i Mauritanie no hampiantrano ireo filoham-pirenena sy mpikambana anatin ny governemanta miisa 55 manoloana ny fivoriamben’ny vondrona afrikanina andiany faha- 31, izay tanterahina ao Nouakchott. Lohahevitra lehibe izay mbola hodinihina dia ...Tohiny